EXPRESS DE: AC Milan oo 50 milyan oo wada doonaysa Kevin Kampl & Hakan Çalhanoglou – Gool FM
EXPRESS DE: AC Milan oo 50 milyan oo wada doonaysa Kevin Kampl & Hakan Çalhanoglou
(Leverkusen) 27 Juunyo 2017 – Sheekadu ilaa shalay waxay ku saabsanayd Hakan Çalhanoglou balse sida ku qoran warsidaha Express DE waxay AC Milan doonaysaa inay hal heshiis kusoo wada qaadato isaga iyo Kevin Kampl, oo ah 26-jir garabka iyo khadka dhexe ka ciyaara.
Sida ku qoran Express DE, oo aad ula socda arrimaha Cologne iyo Leverkusen ayaa qoray inay Rossoneri la diyaar tahay heshiis xiran oo ku kacaya 50 milyan oo euro oo ay kusoo wada qaadanayso labadan laacib oo hibo kubadeed leh.
Kooxda Bayer Leverkusen ayaa lafteedu arrintan markii ugu horreeysey ka hadashay iyadoo soo dhowaysay heshiis kasta oo u cuntama. “Haddii qiime macquul ah naloo gaaro diyaar baan u nahay inaan ka hadalno.” ayuu yiri Jonas Boldt oo ka mid ah maamulka kooxda Bayer.
Leverkusen’s Hakan Calhanoglu (L) and goal-scorer Kevin Kampl cheer after the 1-0 goal during the German Bundesliga soccer match between Bayer Leverkusen and RB Leipzig in the BayArena in Leverkusen, Germany, 18 November 2016. Photo: MARIUS BECKER/dpa
Paolo Maldini oo ciyaaray kulan-bilowgiisii teeniska dheer + Sawirro